Lomiri: Umanyano 8 ufumana igama elitsha, kodwa uyaqhubeka njengangaphambili | Ubunlog
Imbali yoBumbano 8 yaziwa kakuhle. Iqale ukufumana ukuthandwa xa iCanonical yathetha ngokudibana kwe-Ubuntu, into edityaniswe yinkampani eqhuba uMark Shuttleworth kuba bayayiqonda into yokuba, ubuncinci namhlanje, ayinakwenzeka ukusebenzisa inkqubo efanayo kwiikhompyuter nakwiikhompyuter. . Ezi zezahluko zamaxesha adlulileyo kuthotho apho isiqendu sokugqibela esisizisele igama elitsha: lomiri.
Kodwa yintoni uLomiri? Ke kwaye indlela esifunda ngayo Ekungeneni kokugqibela kwe-UBports, ibizwa ngokuba yi "loumiri" kwaye ayisiyonto ingaphezulu kwe igama elitsha lobumbano 8. Ke ngoko, iLomiri yindawo yemizobo elungele ukusetyenziswa kwiifowuni, kwiitafile, kwiilaptops nakwiidesktops. Kwakhona, isekwe kubumbano ukuba i-Canonical iqalile, kodwa ayisasebenzi ngokuhambelana nenkampani. Ukusukela ukuba i-Canonical iwushiye, kunjalo UBports othatha uxanduva lophuhliso lwayo. Akukho nto itshintshileyo ngaphandle kwegama lakhe.
1 I-Lomiri ijongeka intle kwiifowuni, iipilisi nakwiikhompyuter
2 Kulula ukubiza kunye nokusebenzisa
I-Lomiri ijongeka intle kwiifowuni, iipilisi nakwiikhompyuter
I-UBports icacisile ezinye zezizathu zokuba zithathe isigqibo sokutshintsha igama le-Unity 8 ibe yiLomiri kwaye eyokuqala abayikhankanyileyo yile "Ubunye" ikwayi-2D / 3D yokulinganisa kunye neqonga lemidlalo. Kwakukho abasebenzisi abaninzi abeza bebuza malunga nemidlalo kwiiforamu ze-UBports, eyayiyingxaki eyaphazamisa yonke into kwaye kwafuneka bayisombulule. Ezinye izizathu zichazwe ngolu hlobo lulandelayo:
Ukongeza, iinzame ziye zaqala ukubopha uLomiri kwiDebian naseFedora. Indawo yokuncamathela kwezi nzame ligama elithi "ubuntu" kuninzi lokuxhomekeka kweLomiri. Umzekelo, "ubuntu-ui-toolkit", "ubuntu-download-manager", "qtubuntu", njalo njalo. Abapakishe balumkisa ukuba iipakeji ezinegama "ubuntu" zinokungamkelwa kulwabiwo ekujoliswe kulo.
Esinye isizathu esincinci sobuchwephesha sinento yokwenza nokubizwa kwayo: Ubunye8 bekunzima ukubiza, ke bekunzima ukuyithetha amaxesha amaninzi kwincoko. Ekuqaleni, babelindele ukuba iCanonical iyishiye iye "kubumbano", kodwa ayenzekanga. Into eyenzekileyo kukuba bayishiye iprojekthi kwaye igama ligcinwa, ke olu tshintsho kuye kwafuneka lwenziwe UBPorts.
Kulula ukubiza kunye nokusebenzisa
I-UBports izame amagama amaninzi ngaphambi kokuthatha isigqibo ngeLomiri, kodwa bonke babenengxaki enye okanye enye. Igama elikhethiweyo liphelele kuba kunjalo Kulula ukubiza kwaye ayibonisi naziphi na iingxaki zophuhliso, Okubandakanya ukungalwi kunye nokuxhomekeka.
Kodwa eyona nto ibalaseleyo kwaye yeyiphi eyona inomdla kubasebenzisi yile asiyi kuqaphela nto konke konke. Ubunye 8 abuzange buvele naphi na kwiinkqubo zokusebenza ezisebenzisileyo, ke yonke into iya kuqhubeka njengangaphambili. Ekuphela kwento ekufuneka siyazi kukuba ukusukela ngoku abaphuhlisi bayibhekisa kuyo ngelinye igama, ekufuneka siliqhelile ukuliva kwaye sithi.
Kuthekani ngokutshintsha kwegama ukusuka kwi-Unity 8 ukuya eLomiri?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ifowuni yeBuntu » Ubunye 8 buswelekile; phila lomiri
Kwam lusizi ukuba i-canolical iyakubulala iprojekthi ukutshintsha i-gnome linyathelo elibuyayo nangona namhlanje i-gnome 3 ilunge kakhulu kodwa ubuntu ngomanyano bohlukile bunobunikazi bayo njenge-linux mint ne-cinnamo kunye nemeko esisiseko ndiyathemba ukuba lomiri isombulula imfihlakalo yethu njengobunye iya kuba 8 isebenza ngenene ibiza injongo yam.
Ubuntu Budgie 20.10 sele ilungisiwe kwaye abaphuhlisi bayo basinika ithuba lokuchaphazela ukukhula kwayo
I-Raspberry Pi 4 2GB entsha ifika ngexabiso elincitshisiweyo kunye nesisombululo sezibuko le-USB-C